५ वर्षको लागि स्थिर सरकार बनाएर देशको विकास र आर्थिक विकास गर्ने :डम्मर सुवेदी –हिमाल ! - itaharinews
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ०६, २०७४ समय: १२:३०:२१
वाम गठबन्धनको तर्फ बाट सुनसरी क्षेत्र नं. २ को उम्मेदवार डम्मर सुवेदी –हिमाल सँग पत्रकार अर्जुन पौडेलको कुराकानी
१ चुनाव आयो उम्मेदवार बन्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज ?
 हिजो वाम गठबन्धनको तर्फ बाट सुनसरी क्षेत्र नं। २ बाट मेरो उम्मेदवारी दर्ता भए पछि दुवै पार्टीका नेता ,कार्यकर्ता,शुभचिन्तक र जनता सँगको भेटघाटमा व्यस्त छु ।साथै बधाई र शुभकामना लिनेदिने काम पनि भइरहेको छ ।
२ सुनसरीमा माओवादीले १ नं. क्षेत्रमा टिकट पाँउछ र २ नं.क्षेत्रमा एमालेले पाँउने चर्चाको विचमा एकाएक तपाईले क्षेत्र नं २ बाट टिकट पाउनु भयो । के यसले वाम गठबन्धनलाई कुनै असर पार्दैन ?
 यो सहि कुरा हो कि, हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सुनसरीको १ नं। क्षेत्र बाट कुनै सिट लिन चाहेको थियो । केन्द्रमाबनेको कार्य दलले सिट वाँडफाँड काममा दुवै पार्टीका जिल्ला तहका नेता–कार्याकर्ताहरुको प्रेसर परेको कुरा पनि स्वभाविक थियो । अन्ततः देशै भरी ६० । ४० वाडफाड गर्ने क्रममा सुनसरी को २ नं।क्षेत्रमा हाम्रो पार्टी लाई परेको छ । तेस कारण यो हाम्रो चाहाना भन्दापनि पार्टी केन्द्रको सिट वाँडफाँटको बाध्यता हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अर्को कुरो वाम गठबन्धनलाई यसले कुनै असर गर्दैन किनकी हामी दुई एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य सहित स्थिर सरकार बनाउने अभियानमा छाँै ।
३ वाम गठबन्धन भित्र पनि एक अर्कामा निक्कै नै असन्तुिष्ट देखीन्छ । केही दिन अगाडी तपाँइहरुको पार्टीभित्रैबाट पत्रकार सम्मेलन नै भयो सबैलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ । के छन चुनौती ?
 सानातिना असन्तुष्टिले यो गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन अर्को कुरा म व्यत्तिगत रुपमा उम्मेदवार बन्ने आकाँक्षि पनि होईन तर यो क्षेत्रबाट मेरो नाम सिफारीस भएको र सिट वाँडफाँडमा परेकोले मात्र म उम्मेदवार भएको हो । यदि यो क्षेत्र ए।मा ले को भागमा परेको भए म भन्दा लोक प्रिय र योग्य उम्मेदवार वन्नुहुने थियो त्यो अवस्थामा भने मैले सहयोग गर्नु पथ्र्यो र गर्ने थिए हाम्रो जिल्ला पार्टीको कुरा भनेको सिट वाँडफाँडमा अलि सम्मानजनक सिट प्राप्त हुनु पथ्र्यो भन्ने कुरा चलेको हो अब यो कुरा पुरानो भैसक्यो अब हामी सबै एकजुट भैसकेका छौँ संयुत्त कार्यदल बन्ने जिल्ला तह देखी गाँउटोल सम्म सम्मान संयुत्त चुनावी कार्याक्रम बनाउने अभियानाम सबै नेता कार्यकर्ता लागि सकेकाले सबै जनतालाई उत्साहित बनाएको छ ।
४ तपाँइले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रको विकासी योजना के छन् । कस्तो लक्ष्य लिएर चुनावमा जादै हुनुहुन्छ ?
 यो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै नगर र वडाहरुको समग्र विकास को लागि मेरो पहल कदमी हुनेछ ।
२ नं। क्षेत्र भौगोलीक हिसावले निक्कै लामो दुरीमा रहेको र दुर्गम गाउघर पनि रहेको हुनाले यसको विकास गर्नु जरुरी छ । शिक्षा स्वास्थ रोजगारका समस्याहरु छन् । बाटोहरु व्यवस्थित छैनन् भएको बाटोहरु पनि भ्रष्टचार र कमिसनको मारमा परेर भत्केका विग्रीएका अवस्थामा छन् । भारत सँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रहरुमा चोरी तस्करीका समस्याहरु छन् । खेतियोग्य जमिनमा सिचाइको भरपर्नै व्यावस्था छैन । सहरी इलाकामा व्यवस्थित सहरीकरणको समस्या छ । सुकुमवासी , कृषकको लागि सित भण्डार, मजदुर किसानका समस्याहरु छन् यी समस्याहरुको सामाधानका लागि यहाँका अगुवाहरु सबै मतदाताको राय सुझाव लिएर समाधान गर्ने प्रकृयाको नेतृत्व मैले गर्ने छु । यो क्षेत्रमा पर्ने धार्मीक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने सबै जात जाति भेष संकृतिको संरक्षण र विकासमा विषेश योजना अगाडि ल्याउने मेरो सपना छ ।
५ अन्तयमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
 अन्तयमा वाम गठबन्धनले विजय हासील गर्ने र ५ वर्षको लागि स्थिर सरकार बनाएर देशको विकास र आर्थिक विकास गर्ने हाम्रो लश्य हो । यो लक्ष्य पुरा गर्ने सबै तहका नेता,कार्यकर्ता,सुवेछुक र मतदाताको महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ यसका निम्ति प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधिसभामा मेरो उम्मेदवारी छ र प्रदेश सभा तर्फ क बाट सर्वधोज सावा ख बाट राम प्रसाद मेहेता हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडामा र प्रदेशसभा मा सुर्य चिन्हमा मतदान गर्नको लागि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु